यी प्रक्रिया पूरा गरेपछि पाइन्छ क्यानडाको भिसा – Online Nepal
March 13, 2020 452
नेपालीहरुका लागि क्यानडा पनि सपनाको संसार भन्दा कम्ता छैन । काम गर्न, पढ्न तथा घुम्नका लागि क्यानडामा वर्षेनी विश्वका लाखौं मानिस जान्छन् । तर नेपालीहरुका लागि क्यानडा जान त्यति सहज छैन । विभिन्न मापदण्ड तथा प्रक्रियाहरु पूरा गर्नै पर्छ । यस्ता प्रक्रिया पूरा गर्दा क्यानडाले सहजै रुपमा नेपालीहरुलाई भिसा दिने गरेको छ ।
क्यानाडामा घुम्नलायक त्यस्ता अनेक शहरहरु छन्, अनेक तालहरु छन्, स्कीका लागि स्की रिसोर्टहरु लगायत रमयीय प्रशस्त स्थानहरु छन् । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण नेपालीहरुको क्यानडाप्रतिको बढ्दो रुचिका कारण त्यहाँ जानका लागि चाहिने मापदण्ड र प्रक्रियाबारे यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
के कस्ता प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि क्यानाडा घुम्न सकिन्छ ? क्यानाडा घुम्न त जाने, तर कसरी ? धेरैलाई अन्योलता हुन्छ । क्यानाडा घुम्नका लागि क्यानाडाले पर्यटक भिसाको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई क्यानाडामा टेम्प्रोरी रेजिडेन्ट भिसा (टीभीआर) भन्ने चलन छ । यो पनि दुई किसिमका छन् । सिङ्गल इन्ट्रि भिसा र मल्टिपल इन्ट्रि भिसा । सामान्यतः पर्यटक भिसा बढीमा ६ महिनाको रहने गर्छ ।
यसमा सिङ्गल इन्ट्रि भिसा लिएको मानिस एक पटक क्यानाडा प्रवेश गरी त्यहाँबाट बाहिरिएपछि पुनः उसले अर्कोपटक क्यानाडा प्रवेश गर्न फेरि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । मल्टिपल इन्ट्रि भिसा लिएको मानिसले बढीमा ६ महिनासम्म क्यानाडामा बस्न सक्ने प्रावधान छ ।
एक पटकमा ६ महिना नाघिसकेर क्यानाडाबाट बाहिरिए पनि उसले अर्को पटक क्यानाडा प्रवेश गर्न दोहोर्‍याएर आवेदन भने दिनु पर्दैन । यो भिसाको म्याद भने बढीमा १० वर्ष वा आवेदकको राहदानीको म्याद सकिन १ महिना अघिसम्मको हुने गर्छ ।
पयर्टक भिसाका लागि आवेदकलाई के के आवश्यक पर्छ ?
– आवेदकसँग वैध राहदानी हुनु अनिवार्य छ– आवेदकको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुनुपर्छ– आवेदकले क्यानाडामा रहँदा खर्च गर्ने सम्भावित रकमको श्रोत स्पष्ट हुनुपर्छ– आवेदकले भिसाको म्याद सकिए पनि क्यानाडामै नबसी आफ्नै मुलुकमा फर्किने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ– आवेदकसँग कुनै आपराधिक रेकर्ड रहेको हुनुहुँदैन ।
– आवेदकले पर्यटक भिसामा क्यानाडा प्रवेश गरिसकेपछि कुनै रोजगारी वा व्यावसाय नगर्ने निश्चित गर्नुपर्छ– आवेदक कति समयसम्म क्यानाडामै रहने हो भन्ने समय तोक्नुपर्छ– आवेदक क्यानाडा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँको नियम कानूनको अधिनमा रहन्छु भन्नेमा तयार रहनुपर्छ– आवेदकले कुनै पनि सुरक्षा खतरा उत्पन्न गर्दैन भन्ने निश्चित हुनुपर्छ– आवेदकको क्यानडामा मेडिकल जाँच हुनसक्छ, त्यसका लागि तयार रहनुपर्छ
त्यसबाहेक क्यानाडाको अध्यागमन तथा नागरिकता निकायको वेबसाइट भिसा प्रक्रियाबारे निश्चित गर्न पनि सकिन्छ ।
कसरी दिने भिसाको आवेदन ?
भिसाको आवेदन अनलाइनबाट वा भिसा दिने निकाय (सामान्यतः राजदूतावास) मा गई कागजी आवेदन फाराम भर्न सकिने प्राबधान छ । अनलाइन आवेदनका लागि आवेदकले अनलाइनबाटै डेबिट कार्डको प्रयोग गरी भिसा शुल्क बुझाउन तथा स्क्यानरको प्रयोग गरी आफ्ना सम्बन्धित दस्तावेज स्क्यान गरी अपलोड गर्न सक्छन् ।
कागजी आवेदन फाराम भर्दा बैंक भौचरमा भिसा शुल्क बुझाउन सकिन्छ भने फोटोकपी गरी आफ्नो सम्बन्धित दस्तावेज भिसाको आवेदन फारामसँगै बुझाउन सकिन्छ ।भिसा फाराम भर्दा वैध राहदानी, फोटो, बैंक भौचरलगायतका दस्तावेज आवश्यक पर्छन् । भिसाको आवेदन फाराममा आवेदकले आफ्नो बायोमेट्रिक (औँठाको छाप) पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
भिसा शुल्क चाहीँ सिङ्गल वा मल्टिपल दुबै भिसाका लागि एक सय क्यानेडियन डलर तोकिएको छ । भिसाको आवेदन स्वीकृत भएपनि नभएपनि भिसा शुल्क भने फिर्ता पाइन्न ।भिसाको आवेदन फाराममा कुनै अपूर्ण वा झूठो विवरण पेश गरेमा भिसा लाग्दैन । त्यसैले भिसा आवेदन फाराम भर्ने बेला निकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।
भिसाको म्याद बढाउन पनि सकिन्छ । यसका लागि आफ्नो भिसाको म्याद सकिन १ महिना अगावै म्याद बढाउनका लागि आवेदन दिनुपर्ने प्राबधान छ । भिसाको म्याद बढाउनका लागि पनि १ सय क्यानेडियन डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
भिसाको आवेदन अस्वीकृत भएको खण्डमा त्यसविरुद्ध कतै कुनै पनि निकायमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । किनकी त्यसका लागि तपाई आफै नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । तपाइले बुझाएका दस्तावेजकै आधारमा भिसा लाग्ने/नलाग्ने दूतावासले निर्णय लिएको हुन्छ ।
Prevतोलामा एकै पटक यती धेरैले ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य
Nextसावधान ! आज मौसम निकै खराब, वर्षा, चट्याङ, असिना र ठुलो हावाहुरी आउने !